ယနေ့သင့်ကံကြမ္မာ မည်သို့ပင်ရှိစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယနေ့သင့်ကံကြမ္မာ မည်သို့ပင်ရှိစေ
Posted by manawphyulay on Jul 15, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |0comments
စာဖတ်ရင်း စကားလုံး အသုံးအနှုန်း ကောင်းလေးတွေတွေ့လျှင် စာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မျဉ်းသားမိတတ်ကြသည်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံနှင့် တိုက်ဆိုင်တူညီလွန်းသော၊ ကိုယ့်ခေါင်းထဲက မပီမသ အတွေးကို ပီပီသသ လှလှပပကြီး ဖော်ပြလိုက်သော စာပိုဒ်မျိုးအရေးအသားမျိုး တွေ့လျှင်မှု ၀မ်းသာ၍ မဆုံးတော့။ အကြောင်းကြုံကြိုက်လျှင် အဲ့သည်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စာပိုဒ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ကိုးကားပြောဆိုမည်။ ကိုယ်တိုင်စာရေးသားသည့်အခါ ငှားရမ်းယူငင် သုံးစွဲကြမည်။
တကယ် အံဝင်ခွင်ကျ အနေအထား ကြုံ၍ကား စကားကောင်းတစ်ခုကို မသုံးစွဲဘဲ လုံးဝမနေနိုင်။ သို့ဖြင့်ပင် ရှေးလူတွေ ပြောခဲ့သည့် ထိမိသော စကားနှင့် ယင်းတို့က သယ်ဆောင်လာသည့် ထူးခြားသော အတွေးများသည် နောက်လူတွေ လက်ဆင့်ကမ်း ကိုးကားခြင်းဖြင့် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့နေကြခြင်းဖြစ်
စကားတစ်ခုကို ကိုးကားဖန်များသည့်အခါ ရိုးသွားသည် ၊ အာနိသင်ပြယ်သွားသည်။ ထိခိုက်ရှတမှုမရှိတော့။ အဲသည်အခါ လူမသုံးတော့။ တဖြည်းဖြည်းတိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ် သွားသည်။ တိမ်မြုပ်သွားသော အတွေးစကားတစ်ခွန်းကို တစ်စုံတစ်ယောက် အနေအထား တိုက်ဆိုင်လှသည့် အခါသမယ တစ်ခုမှာ အမှတ်မထင် ပြန်လည်ဖော်ထုတ် သုံးစွဲပြလိုက်သည့်အခါ ယင်းစကားသည် အာနိသင်ပြည့်ဝစွာပေါ်လာပြန်သည်။
တချို့စကားဆိုလျှင် ခေတ်အဆက်ဆက်အတွင်း ပေါ်လိုက်၊ ပျောက်လိုက် ၊ ဟိုတိုင်းပြည် သည်တိုင်းပြည် ကူးသန်းရောက်ရှိလိုက်။
ထို့ကြောင့် တချို့ စကားတွေမှာ ပိုင်ရှင်အမည်တွေများနေသည်။ တချို့စကားကျတော့ မူလပိုင်ရှင်စစ်စစ်ကို ရှာ၍ပင်မရ၊ ရှေးပဝေသဏီထဲမှာ ပုန်းလျှိုးပျောက်ကွယ်နေသည်။
စာထဲပေထဲမှာ မကြာခဏ တွေ့ကာ ခေါင်းထဲစွဲနေမိသော စကားတစ်ခွန်းရှိသည်။ This,too,will pass away. ဒါလည်း ပြီးသွားမှာပါတဲ့။ စာသားက ရိုးရိုးလေးပင်။ သို့သော် တန်ခိုးရှိသည်။
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် စိတ်ထဲ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကာ တနုံ့နုံ့တွေးနေမိသည့်အါမျိုးတွင် သည်စကားလေ ခေါင်းထဲပေါ်လာလျှင် စိတ်ထဲပေါ့ပါးသွားတတ်သည်။
အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပါကွာ ၊ ပူမနေပါနဲ့။ သည်စကားလေးက နှစ်သိမ့်အားပေသည်။
သိပ်အားတက်နေ ၀မ်းမြောက်နေ တစ်ကိုယ်တည်းပီတိတွေဖြာနေမိသည့် အခါမျိုးမှာ လည်း ကိုယ်ရှိန်သတ်နိုင်အောင် သူက သတိဖော်ပေးသည်။
ဟေ့…သိပ်ကြည်နူးမနေနဲ့ ကိုယ့်လူ၊ ဒါလည်း အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာ။
တန်ဖိုးရှိလှသည့် စကား။ လောကကြီးထဲမှာ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ နေတတ်အောင် တစ်ခွန်းတည်း နှင့် နှစ်ဖက်နှစ်လမ်း ညှပ်ပိတ်ထိန်းထားပေးသော စကား။
သည်စကားကို ဘယ်သူစပြောခဲ့သလဲ။ သည်စကားက ပေးသော အတွေးကိုဘယ်သူစတွေ့ခဲ့သလဲ။
ဘတ်တလက်(John Bartlett)ရဲ့ လူသိများသော ကိုးကားစကားများ (Familiar Quotations)ကျမ်းမှာ ရှာကြည့်တော့ သုံးစွဲခဲ့သူတွေ အများအပြားပါကလား။
တိမ်တိုက်တွေ လာနိုင်တာ သတိထားပါ
ပေါ်လာမည့် အလင်းရောင်ကို ငံ့လင့်ပါ
ဒါလည်း ပြီးသွားမည်ဆိုတာ သတိရပါ”တဲ့
ကဗျာဆရာ ဂျေဂျီဆက္က(စ)(J.G.Saxe1816-87) က သည်စကားလေးက ပေးသော အတွေးကို “ဖွင့်”၍ရေးခဲ့သည်။
သည်လိုပဲ။ ၀ထ္ထုရေးဆရာ Nathaniel Hawthorne ကလည်း The Marble Faun ၀ထ္ထုထဲမှာ သုံးသည်။ Paul Hayne, Thomas Aldrich, Benjamin Winslow, Ella Wilcox, Mrs. Lanta Smith, Jamie Holme စသည့် ကဗျာဆရာ၊ ဆရာမ တွေလည်း ကဗျာစာသားများထဲမှာ ထည့်သုံးသည်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်တွေအဖြစ်လည်း သုံးကြသည်။ မဆိုစလောက် ကွဲပြားကြတာလေးတွေတော့ ရှိသည်ပေါ့။
This,too,will pass away.
အများသုံးခဲ့ကြတာဟုတ်ပါပြီ။ သို့သော် ဘယ်သူက စသလဲ၊ လိုက်ကြည့်တော့ ဒဏ္ဍာရီထဲရောက်သွားသည်။
ပုံပြင်စတင်ထွက်ပေါ်သည့် နေရာက အနောက် အာရှဒေသဖြစ်သည်။
တစ်ရံရောအခါ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးသည် စိတ်ပင်ပန်း ဆင်းရဲစရာတွေ အများအပြား ကြုံရပြီးသည့်နောက်၌ အမတ်ပညာရှိတို့အား မိမိအားကိုးပြုစရာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ရေးသားပြုစုပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ ဆောင်ပုဒ်က လက်စွပ်တစ်ကွင်းပေါ်မှာ ရေးထွင်း၍ ရလောက်အောင်လည်း တိုရမည်။ အောင်မြင်စဉ်ရော နိမ့်ပါးစဉ်မှာပါ သုံးစွဲနိုင်တာမျိုးဖြစ်ရမည် ဟုဆိုသည်။ မှူးမတ်တွေ ဆောင်ပုဒ်အမျိုးမျိုး တင်ပြကြသည်။ ရှင်ဘုရင် လက်မခံ။ အားလုံးကို ပယ်ချသည်။ နောက်ဆုံး သမီးတော်က သူမရွေးချယ်ထားသည့် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို မြလက်စွပ်တစ်ကွင်းမှာ ရေးထွင်းပြီး ဆက်သတော့မှ ရှင်ဘုရင် နှစ်သက်သဘောကျသွားသည်။ လက်စွပ်ပေါ်မှာ အာရေဗီဘာသာဖြင့် ရေးထွင်းထားသည့် စာသား၏ အဓိပ္ပာယ်က This,too,will pass. ဟု၍။
အနောက်အာရှမှ အိန္ဒိယသို့ ရောက်ရှိနေသော သည်ပုံပြင်ကို ဥရောပ(အင်္ဂလန်)သို့ အဓိကသယ်ဆောင်ဖြန့်ချီခဲ့သူက အိန္ဒိယတွင် ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံချုပ် လုပ်ခဲ့သူ ၀ါရင်ဟေးစတင်း(စ) (Warren Hastings) (၁၇၃၂-၁၈၁၈)ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံချုပ်ဟောင်း ဟေးစတင်း(စ) သည် အင်္ဂလန်သို့ ပြန်ရောက်ပြီးသည့်နောက်တွင် (ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေး သမားတစ်စု၏ ထိုးနှက်မှုကြောင့်) ဘုရင်ခံဘ၀က အားဏာအလွဲသုံးစားပြုခဲ့သည် ဟူသော စွဲချက်ဖြင့် ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း ခံရသည်။
နောက်တွင် တရားရုံးက သူ၌ အပြစ်မရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင် ငွေကုန်လူပမ်းခံကာ အမှုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ ထိုကာလအတွင်း This,too,will pass. စကားလေးဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အားပေးမြှင့်တင်ရကြောင်း၊ မိတ်ဆွေများအား ဟေးစတင်း(စ) ဖွင့်ဟပြောဆိုမိရာမှ သည်ပုံပြင်နှင့်သည်စကားလေး အင်္ဂလန်တွင် ပြန့်ပွားထင်ရှားသွားခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ကဗျာဆရာ သီအိုဒိုတစ်လတန်(Theodore Tilton) (၁၈၃၅-၁၉၀၇) က Even This Shall Pass Away ခေါင်းစဉ်တပ်လျက် သည်စကားအကြောင်း ပုံပြင်ကို လင်္ကာဖွဲ့ဆိုသည့်အခါ၌မှု ပုံပြင်ထဲက ရှင်ဘုရင်အား ပါရှားပြည်(ယခုအီရန်ပြည်)ကို အစိုးရသောမင်းဟု တိတိကျကျ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရသည်။ သူ့ကဗျာပထမပိုဒ်က ဤသို့။
Who upon his signer ring
Gaye him counsel ataglance